Google inosimbisa iwo mazita achave aripo pakuvhurwa kweGoogle Stadia | Linux Vakapindwa muropa
Google inosimbisa iwo mazita anowanikwa kuGoogle Stadia kuvhurwa
Kuenderera mberi nekutevera Google Stadia, izvo zvaive yakaziviswa pagore ra2019 reMutambo Wekuvandudza Musangano .
Zvichakwanisika kushandura zviri nyore kubva kune imwe kifaa kuenda pane imwe. Pfungwa yeGoogle ndeyekutibvumidza kuti titambe kuburikidza neStadia pamapuratifomu atinawo, pamwe nenhumbi dzatove nadzo. Iyo kambani yakafungawo muchinjikwa-chikuva, pamwe kwete kuti igadzire kumwe kukwikwidzana pakati pevanyaradzi.
Iwo mazita eStadia akatosimbiswa
Maawa mashoma apfuura, Google yakazivisa kuti kuvhurwa kweStadia Connect kunouya nemazita mazhinji. Rondedzero yacho inosanganisira zvimwe zvezvinhu zvekare kubva mumakore mashoma apfuura, kusanganisira Final Fantasy 15, Thumper, uye yakadzoreredzwa Tomb Raider Trilogy, zvitsva zvinoburitswa seMetro Ekisodho neMortal Kombat 11, nemitambo iri kuuya saWolfenstein Youngblood, Borderlands 3, uye Ghost Recon Breakpoint.
Heino runyorwa ruzere:
Gedhi reBaldur 3
The Elder Rakafa Online
Kurima Simulator 19
Power Rangers: Hondo yeGrid
Kurwiswa paTitan 2: Hondo yekupedzisira
Rise of PAGUVA Raider
Mumvuri PAGUVA Raider
Unofa Kombat 11
Nhasi Masikati Genesisi
Vanamwari uye Zvikara
Tarisai Imbwa: Legion
Orcs inofanira Kufa! (Zvakasarudzika)
Paradza vanhu vese!
Asi zita hombe rakaziviswa Muvhuro weStadia ndiCyberpunk 2077. , iri kuuya yakavhurika-pasi RPG kubva kune anovandudza The Witcher 3: Wild Hunt CD Projekt Red.
Yakagadzwa mune ramangwana re transhumanistic, Cyberpunk 2077 ine yakadzika hunhu hunhu pamisimboti yayo, sezvo vatambi vachirwira kuti vabudirire muCalifornia usiku husiku.
Pamusoro peaya mazita ezuva rekutanga, Pakave nezvimwe zviziviso nezvemitambo iri kuuya kuStadia mushure mekutanga, kusanganisira Baldur's Gate 3.
Nezve Orcs Inofanira Kufa 3, Patrick Hudson, CEO weRobot Entertainment, akadaro Orcs Inofanirwa Kufa 3 (OMD3) ichave yenguva pfupi yakasarudzika yeStadia, asi kuti kambani haina kutaura kuti kuwiriranisa kunotora nguva yakareba sei:
“Mushure mekunge OMDU yamiswa, Robot yaifanira kudzikisa saizi yekudzidza kwedu. Isu takadzora uye takatarisa kuyedza kwedu kugadzira mitambo midiki pane mutambo weMDC. Isu tanga tisingazive kuti riini kana kuti taizodzoka kune iyo OMD franchise.
“Takasangana neGoogle kuti tizive zvakawanda nezveStadia yemamwe mapurojekiti. Isu takaona kuti vashandisi veGoogle vaive mafeni makuru eOMD. Izvi zvakatungamira mukutsvaga kweizvo zvinogona kuitika nemutambo weODD paStadia. Isu tese takafadzwa nemafungiro edu uye takasarudza kuitevera.
"MDG3 haigoneke nhasi pasina rutsigiro rweGoogle. Zviri kunyanya kuvonga kwavari kuti mutambo uyu uchaona kupenya kwezuva. Isu tinotora vamwe vanogadzira kuti izvi zviitike. Uyu ndiwo mutambo weODD uyo vateveri vemitambo miviri yekutanga vatadza, uye tinofara kuva nemukana wekuzviita.
Kana OMD3 yawanikwa muChirimo 2020, ichave yenguva pfupi yakasarudzika paStadia. Isu tinokuudza zvimwe nezve mamwe mapuratifomu mune ramangwana. «
Tichagadzirisa zvinyorwa izvi nguva dzose sezvo zvakawanda zvichiziviswa.
Sezvataurwa pamusoro, sevhisi inodhura madhora gumi pamwedzi, kusanganisira kupinda mumitambo uye kudzikisira pakutenga.
Yekutanga vhezheni yebasa ichave ichiwanikwa imwe nguva gore rinouya. Kana ichitanga munaNovember, sevhisi ichave ichiwanikwa munyika gumi nemanakusanganisira US, Canada, UK, Ireland, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, uye Finland.
Asi zvimwe zvichawedzerwa muna 2020.
Google parizvino iri kupa pre-odhiyo ye $ 130. Izvo zvinosanganisira mutungamiriri, Chromecast Ultra, uye mwedzi mitatu yebasa revashandisi uye mumwe muenzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inosimbisa iwo mazita anowanikwa kuGoogle Stadia kuvhurwa
Ubuntu Bata OTA-10 ikozvino yavapo, idzi ndidzo shanduko
KISS Linux, distro nyowani yakazvimiririra yakasarudzika yevashandisi vepakati nepamberi